ဂန္ဓမာ – chrysanthemums | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home & Garden » ဂန္ဓမာ – chrysanthemums	24
ဂန္ဓမာ – chrysanthemums
Posted by ဇီဇီ on Sep 26, 2015 in Home & Garden, Photography | 24 comments
ဒီနေ့ ဂန္ဓမာ ပန်းတွေ ရိုက်မယ် ဆိုပြီး သွားတဲ့ ရုံး အဖွဲ့နဲ့ လိုက် ယောင် ခြောက်ဆယ်လိုက်တာ။
တစ်ပွင့်ချင်းစီမှာ ထွေထွေထူးထူးမလှလို့အခင်းလိုက်လေးတွေပဲ ဝေါပေပါ လုပ်လို့ရအောင်။
ဒါထက်လှတာတွေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ဈေးထဲမှာ ပေါပါတယ်။
naywoon ni says: လှလဲလှဘူး သူ့ကိုသူကျ​တော့ လှ​အောင်​ရိုက်​တယ်​ ။ ပန်းကျ​တော့ လှ​အောင်​မရိုက်​ဘူး ၃၆၀နဲ့ ရိုက်​မလာလို့လားဟင်​ !
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဓာတ်ပုံ မှာ ၃၆၀ ကပဲ လှအောင် လုပ်နိုင်တယ်ထင်ရင် ဘနီ ကျန်ခဲ့ပြီ…
ပန်းးတွေကို လှတယ်ဆိုပြီးး တင်တာ မဟုတ်ဘူးးလေ..
မလှ ဘူးးပြောပြီးးမှ တင်တာ
Ma Ma says: အကုန် ဂန္ဓမာမျိုးတွေချည်းပဲလား။
ပန်းခင်းကြီးကြည့်ရတာ ပျော်စရာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ် ချစ်မ
၁) ဒေစီနဲ့ တူတဲ့ ပန်းတွေကို single and semi-doubles လို့ခေါ်သတဲ့..
၂) အမျှင်ရှည်ပါတဲ့ဟာတွေက spider တဲ့
၃) ကျော် တို့ ဘုရားပန်းထိုးတဲ့ ပန်းမျိုးက irregular incurve တဲ့..
၄) ဘောလုံးးလေးးတွေ လိုမျိုးးက pompon တဲ့..
မြစပဲရိုး says: အရမ်းကို လှ ပြီး စိုပြေ နေတဲ့ ပန်း တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ဇီကလေး။
ပုံ ၆ ကို ကြည့်ပြီး ရေခဲမုန့် တွေ ကို ပြေးသတိရမိတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘုရားးပန်းး တင်ဖို့ ခိုးးခဲ့ချင်တာ
kai says: ဆွမ်းကပ်..ရေကပ်တာထက်စာရင်.. ပန်းကပ်တာက..
ကြည့်တဲ့သူတွေမှာလည်း…စိတ်ချမ်းသာ.. အကျိုးရှိသမို့.. တင်တာကောင်းတယ်ထင်တာပဲ..
ပိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. ဘုရားရှေ့..လူမသိတဲ့ဘုရားခန်းထဲထက်.. အိမ်ဧည့်ခန်း.. လူမြင်တဲ့နေရာဆိုပိုကောင်းပေါ့…။
အဲ.. ပန်းကိုလည်း.. အီကဲဘနလို.. အလှပြင်စနစ်လေးပါထားပြီး.. လုပ်ရင်ပိုတောင်ကောင်း..
ဂျပန်အိမ်ထောင်ရှင်မတွေက.. သူတို့စိတ်အခြေအနေကို ..လင်ယောက်ျားမြင်သာထင်သာအောင်.. ပန်းအလှပြင်ပြီးပြတယ်လို့.. ဆိုရိုးရှိတယ်…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့် ဘုရားပန်းကို မထိုးလည်း အရှင်းးး
ဘုရားပန်းလဲချင်ရင်လည်းး လှပြီး စိတ်တိုင်းကျမှာ လဲတယ်။
ဘုရားပန်း ဟောက်ပက်မို့ အိမ်က ခေါ်တာ ဒိတ္ထိမ တဲ့။
မလဲနိုင်လို့ ခြင်ပေါက်တဲ့ အချိန် NEA က လာစစ်ရင် ပိုးလောက်လန်း တစ်ကောင် ၂၀၀ ဒေါ်လှ ပေးရတာတော့ မသိကြဘူးး
Was this answer helpful?LikeDislike 2283
Ma Ei says: တစ်ချို့ပန်းလေးတွေ ဒီမှာမရှိသေးဘူး
3 .6. 8 . 18 က အ၀ါရောင်လိုမျိုးလေးတွေလေ ဒီမှာမရသေးဘူး
အခင်းလိုက် လှနေတော့ တစ်ပွင့်ချင်းလဲ လှမှာပါနော်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: spider and pompon မျိုး မရှိသေးတာ မွအိရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .လှတယ်..လှတယ်..ပန်းလေးတွေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: လာအားပေးတာ ကျေးကျေးပါ မိုက်မိုက်
@QUIL@ says: အာ့လေးတေ အာလူးလေးနဲ့လှိမ့် ဆီပူလေးထိုး ထပ်စပ်စပ်လေးကြော်ချင့်ထှာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထားသမျှ ရဲဇား ထားခဲ့ဂျဘာဇီ
kai says: ဂျပန်တွေ.. စားတဲ့ပန်းပွင့်ဖတ်တွေချည်း.. တမျိုးရှိသဗျ…။
ရှာလကာရည်.. သကြား..အရက်တို့နဲ့န်ှပ်ထားပြီး.. စားတာ…။
ဂန္ဓမာပန်းများလားတောင်မသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲ့ ပန်းး က
ပို့စ် တင်ဖူးးပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: တွေ့ပြီ..တွေ့ပြီ.. ဒီပန်း..ဒီပန်း..
ဇီဇီခင်ဇော် says: တင်ဖူးတယ်။ ဒီမှာကြည့်။
ခု အဲဒီပို့(စ) ပြန်ပြရင်တောင် တဂျီး ရွာကြီး ပျက်တုန်းက တညားပုံဒွေ ပါသွားပါရောလားးး
Alinsett @ Maung Thura says: ဒါထက် လှတယ်ဆိုတာတောင်မှ ဒါလောက် မလှလောက်ဘူး
ဇီဇီခင်ဇော် says: အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုပို တူလာ တလိုလိုပဲ
အောင် မိုးသူ says: တစ်ပတ်က travel & tours က အစ်မက အဲ့လိုပုံတွေတင်သေးတယ် ဘာပန်းလဲတဲ့ ကျတော်က ဂန္ဓမာမျိုးတွေပါ အစ်မရေလို့ ဖြေခဲ့သေးတယ် မှန်တာပေါ့နော့်။ အိမ်မှာ ဘုရားစင်တင်ရင်တော့ ဂန္ဓမာကိုမကြိုက်ဘူး အပေါ်ကိုမော့နေတော့ မလှဘူးထင်လို့ သူ့အနံ့နဲ့ ပွင့်ဖတ်ပုံတွေကိုတော့ သဘောကျတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူ့ အနံ့ကို ခု အများကြီး မို့လို့သာ ရှိတယ်လို့ သိတာ။
aye.kk says: ဂန္ဓာမာပန်းရဲ့ ရနံ့ ရယ်
သူရနံ့ ကိုတော့ ခုချိန်ထိနှစ်သက်နေဆဲပါ။
ဂန္ဓာပန်းက အရိပ်နှစ်သက်ပြီး လေကေါင်းလေသန့်ရတဲ့နေရာမှာ
စိုက်ရတယ်။ရေကိုနှစ်သက်တယ်။ နေအရမ်းပူချိန်ကလွဲရင် ရေကို မကြာခဏလောင်းပေးရတယ်။
ရေလောင်းနိုင်လေ…ပွင့်လေဘဲ။ အပင်က အပူဓါတ်အားကြီးလို့ အပင်ရဲ့ အမြစ်ကရေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားမြင့်မားတယ်။။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘုရားးပန်းး ဆို
ဂန္ဓမာ ပန်းးတင်ရတာ ကြိုက်တယ်